China Custom Folded Leaflet Flyer Printing Service Mpanamboatra sy mpamatsy | Fanontana fahalalana
Anaran'ny vokatra: serivisy fanoratana taratasy ravina vita amin'ny alàlan'ny fanontana
Ny habeny sy ny famolavolana: namboarina manokana
Famarana vita: matte lamination na tsy vita
Vidiny an-tariby: usd0.05-usd0.9
Uch dia voalaza momba ny antony hampiasana ny fivarotana brochure. Iray amin'ireo fitaovana marketing ilaina indrindra izy ireo. Tsy vitan'ny hoe mahita sary an-tsaina ny fahitana ny kendrenao misy sary an-tsary be dia be, izy ireo dia manana efitrano be koa hanazavana ny antsipirian'ny vokatra sy ny serivisy.
Tsy afaka hiteny zavatra mitovy momba ny fomba fampiasana bokikely tena izy isika. Mazava ho azy, maro ny maoderina brochure maimaimpoana azonao ampiasaina hampandrosoana. Na izany aza, lahatsoratra vitsy dia miresaka momba ny famoronana bokikely sy ny fomba fampiasana azy ireo.
Ny mampiavaka ny brochure dia hoe manana faritrany maro. Ho an'ny fivarotana brochure mahomby, ny fahafantarana hoe rahoviana amin'ny fampiasana brochure dia zava-dehibe. Aorian'ny famakafakana hoe inona ny votoatiny dia manatsara kokoa ny tsenan'ny kendrenao, tokony hisafidy izay sosia brochure mety ianao.
Ao amin'ny print Runner dia manolotra faribolana maromaro azonao ampidirina amin'ny bokinao. Ny fanamby ihany no safidy. Ireto misy karazana karazany famoronana bokikely sy ny USES tsara indrindra amin'izy ireo.
Ny fomba tsotra indrindra hanoratana bokikely dia ny mamelona azy amin'ny antsasaky. Ity safidy lavorary ity dia mamorona takelaka roa amin'ny lafiny tsirairay, toy ny boky iray. Azonao ampiasaina ho an'ny fampisehoana orinasa tsotra tsy misy pejy be loatra. Ny pejy tokana somary lehibe dia mety ho tombontsoa lehibe ho an'ny famolavolana sary hita maso.
Telo isan-jato no safidy malaza indrindra amintsika. Fantatra ihany koa amin'ny maha-taratasy taratasy, ity fonosana mahazatra mahazatra ity dia misy endrika telo mitovy amin'ny andaniny roa. Mifampifangaro ireo ao anaty vala faribolana miavaka izy ireo. Ireny faribolana ireny dia matetika ampiasaina amin'ny fanentanana amin'ny marketing mba hanazavana ny vokatra sy ny serivisy noho ny endriny tokana. Ireo faribolana telo mitovy ireo dia intuitive, indrindra amin'ny filaharan'ny dingana sy lisitry isa.
Aza adino raha tsy mivarotra stock izahay. Manolotra serivisy fanontana izahay ary mila rakitra PDF vektor izahay hanonta. Mba hanomezana vidiny marina, mila fantarintsika ny haben'ny bokinao, ny haben'ny pejy ao anatiny, ny lokon'ny rakotra ary ny anatiny, sns.
Ny habe izay ataonay matetika dia A4, A5, sns.
Previous: Boky fanamboarana boaty fanamboarana boaty ao Shina
Manaraka: Fivarotana Poster A2 mora vidy any Chine